Imfihlo Yokufundela Ekilasini! IThor Schrock Trouces Yokumaketha Kwe-inthanethi iGurus
UThor Schrock Uthumela I-Internet Marketing Gurus? Ukunikeza imali engu- $ 1,800 ngemali nemiklomelo
NgoMgqibelo, Disemba 8, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 UThor Schrock
Funda kuze kube sekupheleni ukuthola ithuba lokuwina i- $ 1,000 CASH!
UDoug futhi iningi lenu lingisekele ohlelweni olulandelayo lwe-Next Internet Millionaire show, futhi noma ngangiwumgijimi wesibili ngaba nethuba elihle kakhulu lokufunda kusuka kwabanye abagijimi abamangazayo be-intanethi ku Ikilasi eliyimfihlo.
Futhi bengingumfundi omuhle KAKHULU. Kuhle kakhulu ukuthi ngithatha ababili babafundisi bami bakudala, uMarlon Sanders no-Armand Morin bayise ehlathini eliseJoel Comm's Uhlelo Lokuhlanganiswa Kwamakilasi Eyimfihlo!
Nakhu engikufundile nokuthi ngibashaya kanjani abanye bezimakethe ze-inthanethi ezihamba phambili emhlabeni.
Yiba yi-Marketing Ninja, hhayi i-Thug Marketing.
UMarlon Sanders wangifundisa inkolelo yokuthile engangikwazi ngokwemvelo esikhathini esedlule. Uthe wonke amandla anobuthakathaka obuhambisana nawo. Uma uphikisana nomncintiswano ophakeme, akufanele uhlasele amandla abo. Ufuna ukuhlasela ubuthakathaka obuhambisana namandla abo.
Isibonelo, uma ukhuphuka uphikisana neBest Buy izama ukuthengisa amakhompyutha, ungavuli isitolo esikhulu esinabathengisi abanamakhono aphansi nabasebenzi bokusekela nokukhethwa okukhulu kwama-PC.
Esikhundleni salokho thengisa amakhompyutha aphezulu asezingeni eliphezulu enzelwe izidingo zomsebenzisi futhi ahlinzeke ngensizakalo ethola umklomelo nohlelo lokusekelwa ukuze ikulondoloze. Ngokuhlasela ubuthakathaka ngamandla abo, ulahla inzuzo yokuncintisana ye-Best Buy.
Lapho Uqhekeka Kakhulu Uyisidingo Sakho Sokuthola Isimo Sakho
Amasayithi afana ne-Amazon, noma i-Google, noma i-Youtube angamawebhusayithi ayizigidi zamadola anamalogo abonwa izivakashi nabantu sebebathembile.
U-Armand Morin ungichazile ukuthi ayikho ingozi eqinisweni ungabona ngeso lengqondo ama-logo enkampani ngayinye engenhla engqondweni yakho njengamanje.
Ngenxa yalokho lapho elinye lala mawebhusayithi lifuna ukuthi uthathe isenzo, noma ngabe ukuthenga incwadi noma ukulayisha ividiyo, kungenzeka ukuthi uthathe leso sinyathelo ngoba uyethemba ukuthi uyalithemba igama nophawu lwazo.
Izindleko ezinkulu kunazo zonke ozithola ebhizinisini ukuthola ikhasimende okokuqala ngqa. Ukuthengisa okwesibili kukhasimende elifanayo kufanele kube yi-cakewalk uma ufake uphawu ngokufanele futhi ikhasimende lakho likubona ngokuzayo lapho ungqongqoza.
Uma isithombe singamagama ayi-1,000 XNUMX, Iyini Ividiyo Ebalulekile?
Ukusebenzisa ividiyo ukushayela ithrafikhi kuwebhusayithi yakho kuyindlela yobuciko, futhi uma uyiqonda kahle uzoba nethuluzi elisebenza ngokwedlulele abantu abaningi abangalinaki.
Noma ngubani angathumela i-backlink kumasekhondi ambalwa. Akuyona inkinga enkulu ukungena ku-Google Search. Kepha ukuthatha ividiyo kuthatha isikhathi esithile nethalente elithile. Iningi labantu alazi ukushayela ithrafikhi ngamavidiyo, ngakho-ke abazihluphi ngalo.
UMike Koenigs Mike ungifundise ukuthi ngiyenza kanjani i-video, ngiyithole phambi kwama-eyeballs, bese ngifaka lawo ma-eye kwiwebhusayithi. Ungifundise ukuthi ngiwasebenzisa kanjani ama-video ukushayela ithrafikhi njengoba kwenza injini yokusesha, futhi lokhu bekuyingxenye enkulu engiqhubele phambili ngaphezu kwabanye abathengisi abakhulu.
Uchaze ukuthi abantu bazoyibekezelela ividiyo embi kuze kube seqophelweni, kepha uma umsindo wakho ungalungile, ngeke udlule kumasekhondi amabili okuqala. Uma uzosebenzisa imali ngezinto zokusebenza, thenga umbhobho wokuqala kuqala, bese uthola ikhamera enhle.
Bese kuthi kube ne- $ 30 okufanele ube nayo yokukhanyisa ongayenza kusuka ezintweni eziseHome Depot ezizokhanyisa isethi yakho yonke yevidiyo. Ulwazi oluthe xaxa oluzokwenza amavidiyo akho abukeke emangalisa futhi akunikeze onqenqemeni ngaphezu kwabanye abambalwa abaphonsa amavidiyo athile ku-inthanethi.
I-Long Tail ingumngani omkhulu we-Traffic we-Blogger
UDave Taylor uchaze ukuthi uma wakha kahle okuthunyelwe ngokuqukethwe abantu abakufunayo, uzovuna inani elincane lomgwaqo kulokho okuthunyelwe ngokungapheli esikhathini esizayo njengoba abantu befuna abakufunayo.
Ekugcineni indlela ende yomsila wokubhuloga izokhiqiza ukudonsa okuningi okuncane okunezela ebukhoneni obubodwa bewebhu.
Ungasesha nganoma yini eku-inthanethi bese uthola elinye lamakhasi kaDave Taylor kwenye indawo emiphumeleni.
I-Symphony kaGugu Butt-Kicking
Esikhundleni sokuthatha kuphela uhlelo lwe-guru elilodwa, ngahlanganisa izindlela eziningi ezivela eSecret Classroom ukwenza umshini wokumaketha owawunamandla amakhulu kunabo bonke abafundisi bami bebodwa.
Ngaqala ngamawebhusayithi amathathu wonke aklanyelwe ukukhuthaza umkhiqizo ofanayo. Amasayithi amaningi asho amathuba amaningi okufuna izindawo emiphumeleni yosesho ephezulu engu-10 bese ephoqa amanye amasayithi ukuthi abheke phansi.
Ngishukumise ngokushesha ukufaka amasayithi ami enkomba ngaphambi kokuqaliswa kwangaphambilini, futhi www.nextinternetmillionairedvd.com kwakuyiwebhusayithi yami ehamba phambili.
Ngilandela iseluleko sikaMarlon, ngidinga ukuhlasela ubuthakathaka kwi-Secret Classroom juggernaut. Esikhundleni sokudlala okufanayo? Ngibeka ikhukhi ku-PC yakho? Umdlalo wokudlulisela phambili, uhlasele i-Secret Classroom ngentengo ngokunikeza isaphulelo.
UJoel unikeza ikhomishini yokusebenzisana engama- $ 200 kuyo yonke isethi eyimfihlo engiyithengisayo, ngakho-ke ngikhokhele isaphulelo se- $ 100 kunoma ngubani othenga kumawebhusayithi wami. Ngiqonde ukubhekisisa, uma ngabe uhlela ukuthenga isethi noma kunjalo, kungani ungagcini i- $ 100, akunjalo?
Lapho nje ngifunda ukuthi igama le-DVD lizoba yi-Secret Classroom, ngisebenzise izindlela eziyisisekelo ze-SEO / SEM ukubamba indawo engu- # 2 kwaGoogle kuwebhusayithi yami elandelayointernetmillionairedvd.com.
Ngokulandelayo ngiqashe i-coder ukuze ingenzele ifomu lokuthumela i-imeyili elangivumela ukuthi ngiqoqe amagama namakheli e-imeyili kumawebhusayithi ngiwagcine kudathabheyisi. Ngikwazile ukuqoqa imikhondo engaphezu kuka-170 yabantu abebenentshisekelo ekunikezelweni kwesaphulelo.
Ngibe sengikhiqiza amavidiyo ayisampula ayi-12 Secret Classroom (1 kumfundisi ngamunye) enziwe ngokuqoshwa kwesikrini sevidiyo nomsindo ovela eziqephu ze-Next Internet Millionaire. Ngisebenzise amasu kaMike ukubhala izihloko, izincazelo, ama-URL kanye nemiyalezo engezansi engezansi ezosebenza. Ngilayishe lawo kumasayithi onke abelana ngamavidiyo emhlabeni.
Ngibe sengibamba cishe zonke izindawo eziphezulu kuGoogle, Yahoo, naku Youtube ukuseshwa kwevidiyo yekilasi eliyimfihlo lokufundela. Okulandelayo, bekuyisikhathi sokuhlasela i-Blog Search.
Ngaqala ukuthumela kubhulogi yami izikhathi eziningi ngosuku ngisebenzisa iseluleko somsila omude sikaDave Taylor. Ngenkathi umncintiswano wami udlala izimpi zamakhukhi ezishayela ithrafikhi ngezixhumanisi ezihambisanayo, bengiqoqa amakheli e-imeyili nokwakha ubudlelwano.
Kwathi ngoDisemba 5 uJoel wadonsa isibhamu. Ngithumele i-imeyili kuhlu lwami, ngashicilela okuthunyelwe kwebhulogi, ngafaka isikhangiso se-Google Adwords, futhi ngafaka amakhasi ami okufika ngemuva kokuqaliswa.
Lapho uthuli seluhleli, ngangiyilungu likaJoel # 1 ngemuva kosuku 1. Ngangiphuma phambili kukaMarlon Sanders kanye no-Armand Morin? wona kanye ama-gurus angifundisa ekilasini eliyimfihlo. Bangase baqoqele ukungifica, kepha kulapho isigaba 2 singena khona!
Ngidinga ukuthi ungisize ngiqede lo msebenzi futhi ngifakazele ukuthi isamba sezimfundiso ze-Secret Classroom sinamandla amakhulu kunesikhathi ngasinye.
Ngigijima a umncintiswano kubhulogi lami ngemali engaphezulu kwe- $ 1,800 nemiklomelo phezulu ukubamba. Ukuphela kokufanele ukwenze ukuze ube nesibhamu ekuphumeleleni ukwenza okuthunyelwe, ubeke amazwana, bese ungeza isixhumanisi se-blogroll.
Bheka umncintiswano ungazise ukuthi ucabangani. Ngizogcina uDoug ethunyelwe ukuthi ngenza kanjani, kepha inhloso yami ukuqeda umsebenzi engiwuqale eColorado ngo-Agasti, futhi kulokhu ngicabanga ukuthi uJoel uzobona.
Ngaphansi kobuholi bukaThor, iSchrock Innovations Computer Company ivotelwe njengenkampani ezimele yokulungisa amakhompiyutha engu- # 1 minyaka yonke kusukela ngo-2001 emakethe enezimbangi eziningi ezinolaka. UThor wakhulisa iSchrock Innovations kusukela onqenqemeni lokuqothuka ngo-2004 yaba ngu- $ 1.5 million ngonyaka wezindlu zamandla wenkonzo ngo-2009 enezindawo ezise-Omaha naseLincoln, NE.
Ngibeka kuphi i-Corporate Blog yami?
UJun 26, 2008 ngo-12: 27 AM
$ 200.00? Ngabe lokho bekungafani nesethi eyi- $ 1500 futhi ubungekho yini ohlelweni uqobo? Hhawu.